Mucaawinada Sweden oo lagu taageerayo maalgashiga Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mucaawinada Sweden oo lagu taageerayo maalgashiga Soomaaliya
La daabacay tisdag 26 april 2016 kl 12.13
Sjöblom: maalgashi fursado shaqo looga abuurayo Soomaaliya
Qurbojoog xiiseyneysa Soomaaliya in ay maalgashadaan oo la kulmay hey'adda Sida iyo ururada Forum Syd iyo Business Sweden sawir: Warsame Elmi
Ururka Forum Syd iyo Business Sweden ayaa iska kaashanaya barnaamij horumarin oo lagu taageerayo ganacsatada iyo shirkadaha yaryar ee doonaya in ay maalgashadaan Soomaaliya.
Barnaamijka labadan urur horumoodka ka yahiin ayaa waxaa 35 milyan oo karoon ku maalgelineysa hey’adda kaalmada caalamiga ah ee Sweden Sida.
- Waa barnaamij qaybo badan ka kooban. Waxaa ku jira qayb ah kaalmo dhaqaale oo qof dalban karo si uu u soo baaro fursadaha ganacsi ee Soomaaliya ka jira. Sidoo kale waxaa ku jira qayb lagu dalban karo maalgashi gaaraya ugu badnaan 200.000 karoon. Iyo weliba qayb ku sabsan horumarinta awoodda iyo karaanka shirkadaha iyo dadka maalgashiga sameynaya oo ah in la siiyo waxbarasho ah maamulidda shirkad iyo horumarinta ganacsigooda. Qayb kalena waxay tahay in la siiyo tacliin ku saabsan sinaanta, xaquuqul insaanka iyo illaalinta bay’adda iyo degaanka, ayey tiri Lisa Sjöblom, xoghayaha guud ee ururka Forum Syd.
Hadefka barnaamijkan maalgashiga laga leyahay ayaa ah sidii fursado shaqooyin looga aburi lahaa dalka Soomaaliya. Qof kasta oo haya fikrado ganacsi oo laga hirgelin karo Soomaaliya ayaa dalban kara in wax laga siiyo kaalmada maalgashi. Balse barnaamijkan si gooni ah waxuu ugu wajahanyahay soomaalida Sweden ee dooneysa in ay malgashato dalka Soomaaliya, gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada, sida ay sheegtay xoghayaha Forum Syd Lisa Sjöblom. Inkasta oo aysan weli caddayn sharuudaha laga doonayo in uu buuxiyo qofka dalbanaya in uu ka qayb-qaato barnaamijkan.
- Waxuu u furanyahay qofkasta oo doonaya in uu dalbado, inkasta oo aysan weli caddayn sharuudaha laga dooonayo qof soo dalbanaya in uu buuxiyo. Laakiin Si gooni ah waxuu ugu wajahanyahay qurbojoogta soomaalida Sweden. Balse qof kasta oo haya fikrado fiicaan oo Soomaaliya shirkad uga hirgelin karo waxuu helayaa fursad uu ku dalban karo maalgashiga barnaamijkan. Laakiin waxaa dhaci karta in ay jiri doonaan sharuuddo farsamo, sida in qof dalbanaya uu leeyahay shirkadd ka diiwaangashan Sweden, balse weli sharuudaha noocay nqon doonaan ma cadda, waxaase laga shaqeynayaa inta lagu jiro gu’gan, ayey tiri Lisa Sjöblom.
Weli ma cadda halka laga dalban doono fursadaha maalgashi ee ku wajahan Soomaaliya, sidoo kalena sharuudaha layska doonayo ma cadda, laakiin kulan lagu qabtay isniinta todobaadkan xarunta hey’adda Sida ayaa lagu sheegay in barnaamijkan maalgashiga soomaaliya uu bilaaban doono dhamaadka dayrta, markaasna la soo dhameyn doono sharuudaha lagu xirayo ruuxa dalbanaya, sidoo kalena la hirgelin doono bog internet ah oo lagu soo bandhigi doono maclummadka barnaamijkan iyo waxa layska doonayo, iyadoo qofka doonaya in uu qayb ka noqdo barnaamijkan maalgashi uu halkas ku soo gudbi doono fikradiisa ganacsi ee doonayo in loo maalgeliyo. Lacagta maalgashiga uu dalbado ruuxa in lagu taageero ayaa sidoo kale asna laga doonayaa in uu keensado lacag u dhiganta.
Dhaqaalaha ku baxahaya barnaamijkan maalgashi ee Soomaaliya loogu talogalay waxaa baxisay hey’adda kaalmada caalamiga ah ee Sida. Baxinta dhaqaalahana waxay u wakiilatay ururka Forum Syd, iyadoo ururka Business Sweden uu qaabilsanaan doono qaybta gacansiinta iyo tacliinsiinta shirkadaha iyo dadka ku guuleysta in ay qayb ka helaan maalgashigan.
”Guud ahaan waxaan oggolaan doonaa baxinta sagaal milyan iyo bar oo ah lacagta Sweden. 40 ah suuqbaaris oo midkiiba dhaqaalaha lagu taageerayo uu noqon doono 35 000 oo karoon iyo 40 kale oo la siinayo taageero maalgashi oo ah ugu badnaan 200 000 karoon midkiiba” ayey tiri Lisa Sjöblom xoghayaha guud ee ururka Forum Syd.